Sathenga iZoo Eyaba bubukumkani bezilwanyana - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa Sathenga iZoo Eyaba bubukumkani bezilwanyana
Sathenga iZoo Eyaba bubukumkani bezilwanyana
ungayixelela njani ukuba unawo amandla eengqondo
Akukho nto ingako yokongeza Sathenga iZoo, okoko isihloko sithetha konke. Kude kude kwiscreen iminyaka emithandathu, umlawuli uCameron Crowe ( UJerry Maguire ) ibuya ngeli xesha leholide iswekile eyenzelwe ukukholisa abantwana bayo yonke iminyaka kubuninzi obuphindaphindeneyo bobukhulu bonke. Ngokusekelwe kwincwadi kaBenjamin Mee, umbhali wase-Bhritane kunye nowayesakuba ngumbhali wemihlathi UMgcini osapho lwabo ngokwenene bathenga indawo yokugcina izilwanyana ebizwa ngokuba yi-Dartmoor Zoological Park kwaye bayiguqula yangumtsalane kubakhenkethi abangama-30 e-Devon, e-Ngilani, nangoku iseyimpumelelo, imovie (ebhalwe nguMnu Crowe no-Aline Brosh McKenna, UMtyholi unxibe iPrada ) uhambise useto ukuya kwi-California eseMazantsi, kodwa ayilahlekanga nanye yemvakalelo yolonwabo kunye nokuzonwabisa kuhambo olunqumla echibini. Izilwanyana ziyafana kuyo yonke indawo, kwaye ke nabantu abazithandayo.
UBenjamin Mee udlalwe nguMat Damon, umdlali okrelekrele kwaye onesiphiwo ozisa intabalala yobukrelekrele nentliziyo kwindima engekho ngaphezulu komzobo wepensile ephepheni, ekhupha indima yomntu ongumhlolo odiniweyo, odidekileyo, osebenza kakhulu kunye nentliziyo egulayo. nabantwana ababini bokukhulisa (jonga uGeorge Clooney in Inzala) ondliwe kukuhla kwehlabathi lobuntatheli.Ukuphelelwa lithemba kakhulu emva kokuba umfazi wakhe esweleke ngesiquphe ngenxa yomhlaza, eshiya usapho lwakhe ngasemva ukuba lusukele umhlaba jikelele kwizabelo eziyingozi kunye nokuphikisana kuphulukana nesibheno. Ke uyawucekisa umsebenzi, ukuhamba umgama ohamba ngenqwelomoya kunye nosizi oluvela kwiinjongo ezintle, ukuchitha amandla kubahlobo, ukuncothula abantwana bakhe esikolweni kwaye, othuse wonke umntu omngqongileyo, angene emanzini omkhenkce kwaye atyale ilifa lakhe isiqwenga searhente yokuthengisa izindlu nomhlaba kude nayo yonke into eqhelekileyo ukuqala kwakhona. Nditsho nomntakwabo uDuncan, odlalwa yiThomas Haden Church, ucinga ukuba ujike wangumsebenzi wamandongomane. UDuncan, kubonakala ngathi wayekhe wabaleka eluntwini kwaye wachitha ixesha elithile eBali ezama ukuzifumana. Into ayifumeneyo kukuba kufana nengoma, ebekhumbula abantu abadinga abantu. Engadimazeki, uBen ujongana nomsebenzi wokulungisa indawo yokugcina izilwanyana ukuze ahlangabezane nemigangatho yokuhlolwa kukarhulumente ngexesha lokuphinda kuvulwe. Umsebenzi uwuthatha, ngeendlela ezininzi kunenye.
Ukulawula isizathu esilahlekileyo esiza nezilwanyana ezininzi ezigulayo kunye nabasebenzi abathembekileyo, abangahlawulwanga abane abakhokelwa ngumgcini wezilwanyana onzima ogama linguKelly (ujiko olothusayo olwenziwe nguScarlett Johansson) iba luxanduva lokuchitha imali ixesha elizeleyo elibiza uBen yonke idenariyo yobomi bakhe. Unyana wakhe okwishumi elivisayo, uDylan (uColin Ford), esalila ngokulahlekelwa ngumama wakhe, uyatshona emngxunyeni wengqumbo, ngelixa intombi yakhe eneminyaka esixhenxe ubudala, uRosie (perky Maggie Elizabeth Jones), etsiba enyuka evuya kwaye evuya. ekhwaza, Sathenga indawo yokugcina izilwanyana! Umgaqo kwisivumelwano sokuthenga yayikukuba umnini omtsha kufuneka abuyisele umyezo wezulu kwimeko yawo yoqobo kwaye usebenze ngokupheleleyo. Akukho kungqubana okuninzi, kodwa ekugqibeleni sidibana kwaye siwele iintlobo zezilwanyana ezisengozini ezingama-50 ezifuna ukuhlangulwa, ukusuka ekuthuthweni kweenyoka ezibalekayo ukuya kwi-moody, i-650-pound grizzly egama linguBuster ngamanye amaxesha efuna iPaxil yoxinzelelo. Endleleni, ufunda izinto ezininzi. Izingwe ze-Bengal kufuneka zohlulwe kuba azihambelani. Awusoze usebenzise amagama eekheji (zibizwa ngokuthobekileyo zibiyelwe). UDylan ucinga ukuba usesihogweni. URosie uthanda yonke into, kubandakanya neempuku eziqokelelwe ukondla iinyoka. Kanye xa uBen ephelelwa yimali, i-trust fund eyashiywa ngumfazi kuye iya kubavumela ukuba bavule nabo bonke abantu abangena-kubandakanya uDylan, ozobe ilogo ye-zoo entsha.
Amahla-ndinyuka okusinda ngelixa bexhonywe ziinzipho zeminwe ahambele phambili ngokungagungqiyo kwaye isiphelo esonwabisayo asiyonto imfutshane, kodwa intsebenzo inyanisekile kwaye uMnu. Damon ubonakala enebhola, enika enye yezona zilungileyo kwaye eyona midlalo iqolileyo kwikhondo lomsebenzi wakhe. Ubudlelwane phakathi kukaBen, besazifihle kwintlungu yokulahleka, kunye noKelly, umthandi wezilwanyana oneminyaka engama-28 ubudala ongenabomi bobuqu, ngobulumko uyayiphepha imifanekiso yaseHollywood ehlala isenza isisombululo sobulolo, ngelixa uDylan ebona ikamva ekubuyiseleni indlela xa efumanisa ukuthandana nomzala kaKelly (u-Elle Fanning, ofana nodadewabo uDakota, okhulayo ukusuka kumdlali weqonga ukuya kwinenekazi eliphambili elinomtsalane wesini ngokukhawuleza kunembumbulu ebhabha). Iindima zizicaciso nje zabalinganiswa abatya inyama, kodwa uMnu.Damon uzisa ubunzulu boluntu kumnini wezilwanyana onenzondelelo kodwa obhalwe phantsi oqinisekisiweyo ukukhuthaza ukuzithemba. Sithenge iZoo unomphefumlo ongaphezulu kobutyebi, kodwa ndiyakuphoswa ukuba khange ibeke uncumo ebusweni bam kwaye igcine apho. Kwibhulorho evuthelweyo yeXesha leYuletide elizaliswe ziimuvi ezimnyama kakhulu kwaye zimbi awukwazi ukuzibukela ungoyisanga, andiboni nto iphosakeleyo ngee-movie ezilungileyo Ihashe leMfazwe kwaye Sithenge iZoo. Njengamanqaku abaphathi besitudiyo abachwethezwe kumakhadi okubhengeza ngokuzilangazelela ukujonga kwangaphambili abaphulaphuli emva kwemini, ndithi Siphe ngakumbi njengale!
Ixesha lokubaleka 124 imizuzu
Ibhalwe ngu-Aline Brosh McKenna kunye noCameron Crowe
Ekhokelwa nguCameron Crowe
Kudlala uMat Damon, uScarlett Johansson kunye necawa kaThomas Haden
Indlela abaGwenjiweyo ababutshintshe ngayo ubuso bePunk ngeNgoma yabo yokuqala, 'iRose eNtsha'
IJersey City Gears Up for 2017 Race kaSodolophu
I-Webcomic Star KC Green kwisizathu sokuba abulale i-GUNSHOW, i-Comic eyamqalisayo
ilizwe elimanyeneyo simahla indawo yokuthandana
Kunokwenzeka ntoni ukuba intaba iyaphumelela
Eyona bhanyabhanya yokusasaza kwi-netflix
ukuthandana apps apps for Android free
uhlala phi ujamie dimon
wayehlala phi u-obama kule hawaii
molo kwimenyu entsha yeveki 38